सँगै जन्मेका यी बहिनीहरुको कोरोनाबाट सँगै निध`न ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/सँगै जन्मेका यी बहिनीहरुको कोरोनाबाट सँगै निध`न !
Corona (COVID-19) UpdatesNews
सँगै जन्मेका यी बहिनीहरुको कोरोनाबाट सँगै निध`न !
बेलायतमा दुई जुम्ल्याहा बहिनीको कोरोनाका कारण दुःखद निध`न भएको छ। घातक कोरोना भाइरस संक्र`मणका कारण उनीहरुको ज्यान गएको बी.बी.सी.ले जनाएको छ। पेसाले नर्स रहेकी ३७ बर्षीया क्याटी डेभिस र उनकी जुम्ल्या एम्मा डेभिसको तीन दिनको फरकमा एउटै अस्पतालमा मृ`त्यु भएको हो।
जुम्ल्या`हाकी कान्छी बहिनीले उनीहरूले मजा`कमा पहिला ”सँगै मर्छु होला भनेर `भन्ने गर्ने गरेको” बी.बी.सी.लाई बताएकी छन्। ”उनीहरूले भ`न्ने गर्थे हामी सँगै संसारमा आयौं र सायद सँगै बाहि`रिन्छौ होला”, बहिनी जोय डेभिसले भनिन्। संयोगवस उनीहरुको सँगै दुः`खद निधन भएको छ।
जोय डेभिसका अनुसार उनीहरु दुवै जना डाक्टर र नर्स थिए। सधै अरुलाई सहयोग गर्ने चाहना राख्ने उनीहरुको यो पेशा बाला`पन देखिको सपना हो। साउ`थहेम्प्टन चि`ल्ड्रेन्स अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा सेवारत रहेकै बेला क्याटीलाई कोरोना पु`ष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनको मंगल`बार साँझ नि`धन भएको हो।
त्यस्तै ए`म्माको ३ दिनको फरकमा एउटै अस्पतालमा कोरो`नाबाट मृ`त्यु भएको परि`वारले पु`स्टि गरेको छ। कोरोना`ग्रस्त बेलायतमा म`हामा`रीको क्र`ममा ५० भन्दा बढि स्टाफ नर्सको ज्यान गइसकेको छ। बेलायतमा कोरोनाबाट १ लाख ४३ बढि संक्र`मित भएका छन् भने १९ हजार बढिको ज्या`न गएको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा तिन स्थानीय तहका १८ जनामा कोरोना संक्र.मण
थप एक हप्ता लक डाउन लम्ब्याउन सिफारिस
बंगलादेशी डाक्टरले बनाएको कोरोनाको औषधीले ४ दिनमा नै बिरामी ठिक, औषधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने तयारी गरिँदै !!!
को रोना म हामारी बीच आएको अत्यन्तै खुसीको खबर,कुलमानको अर्को कमाल फेरी यस्तो चमत्कार- भिडियो हेर्नुहोस
आगला`गीमा परेर छोरा गुमाएका वडा-ध्यक्षको ह्र`दय-घातबाट मृ`त्यु